Naxariistu waxay kaa dhigeysaa qofka ugu quruxda badan adduunka, waxkastoo aad u egtahay. - qarsoodi - Quotes Pedia
Naxariistu waxay kaa dhigeysaa qofka ugu quruxda badan adduunka, waxkastoo aad u egtahay. - Qarsoodi
Quruxdu kuma jiifto sida aad ujeedo, laakiin waa halkii aad kula dhaqmi lahayd dadka kale.
Naxariista ayaa kaa dhigeysa qofka ugu quruxda badan adduunka. Waxa kaliya ee aad ubaahantahay inaad diirada saarto waa inaad dadka kale ula dhaqanto si sax ah, maxaa yeelay taasi waa waxa dadka badankood ku dhacaan maalmahaan.
Waxaa laga yaabaa inaad haysato hodan badan, waxaana laga yaabaa inaad fiiriso gabadha ugu quruxda badan uguna qurxoon ama ninka ugu quruxda badan dunidan, laakiin waxba dhab ahaan waxba ugama socdaan. Waxa kaliya ee muhiimka ahi waa sida aad ula dhaqanto dadka kale.
Halkii aad ka xiran lahayd dharka ugu qaalisan ama aad isku dayi lahayd inaad sida ugu fiican u muuqato adoo xiranaya waxyaabo badan oo isku qurxiyo, iskuday inaad aaminto naxariis iyo fudeyd, waayo kuwani waa labada shay ee kaliya ee go'aan ka gaaraya qaabka aad uga muuqato dadka kale.
Dadku waa iska iloobi karaan quruxda aad haysato, laakiin haddii aad edeb ku jirtay oo aad qalbigaaga ka naxariisatay, taasi waa waxa ay ku xusuusan doonaan noloshooda oo dhan.
Waa lagama maarmaan in la fahmo in dadku maalmahan naxariis ka maqan yihiin, haddii aad leedahayna, waxaa hubaal ah inaad tahay qofka ugu yaab badan dunidan.
Uma baahnid inaad qurux ka muuqato muuqaalkaaga, laakiin haddii aad qalbi jilicsan tahay, dunidan waxba weligeed kama adkaan karto quruxdaada.
Ogow taasi quruxda laguma qiimeeyo sidaad u egtahay dibedda ka timid, laakiin waxay kuxirantahay sida aad gudaha ka eegayso! Sidaa awgeed, waxaad xoogga saartaa inaad noqoto qof qof kastaa u jecel yahay shakhsiyaddaada iyo dabeecaddaada, oo aan ku koobnayn oo keliya muuqaalkaaga.
Hawlaha Quusidda naxariista
Xigashooyin qurux badan dhiirigalin
Xigashooyinka nolosha quruxda badan
Farriimaha Quruxda Badan ee Nolosha
Quotes Qurux Badan
Xigashooyin qurux badan
Xigashooyin qurux badan oo lagu noolaado By
Xigashooyin qurux badan oo leh sawirro
Fikradaha Quruxda Badan
Xulo Tirooyinka Raxmadda
Dhiirrigelinta xigashooyinka Raxmadda
Xigashooyinka naxariista ee Raxmadda
Xigashooyinka naxariista iyo odhaahyada
Xigashada Naxariista Caruurta
Raxmada xigasho Sawirro
Sheegashada Matter Majiraan
Xigashooyinka ku saabsan Naxariista iyo Naxariista
Xigasho Naxariis iyo deeqsinimo
Noloshu waa gaaban tahay, noolow. Jacaylku waa dhif, qabashada. Cadho waa xun tahay, tuur. Cabsidu waa mid laga naxo, ka hor tag. Xusuus-qoryadu waa macaan yihiin, u jeclaadaan. - Qarsoodi
Noloshu way gaabantahay waana inaad barataa inaad ku noolaato halkii aad xitaa hal daqiiqad ku lumin lahayd. Sidoo kale…
Ka taxaddar dadka ereyadoodu aysan u dhigmin ficilladooda. - Qarsoodi
Way fududahay in la sheego intii la qaban lahaa! Haa, dadku badanaa waxay yiraahdaan waxyaabo badan, laakiin haddii aad sugto…
Ku wanaagsanaanta nolosha dhabta ah kan ka aad ku dheehan tahay warbaahinta bulshada. - Qarsoodi
Jiilkeenu waa jiil balwad leh oo bulshada ku dhex milma. Intooda badankeen doorbidaan inaynu jeclaano adduunka meeshiisa ah…
Wax weligood isku sii jirayaa ma aha. Noqo mid faraxsan wax kastoo dhaca, maxaa yeelay isbeddelku waa qayb weyn oo nolosha ka mid ah. - Qarsoodi
Waqtiyada qaarkood, waxaan u muuqanaa inaan ka baqno isbedelka, laakiin waxaa aad muhiim u ah in la fahmo inay jiri karto…
Noloshu waa gaaban tahay. Ha fursad siin fursad aad qof ugu sheegtid sida aad u daryeesho iyaga. - Qarsoodi
Nolosha, qofku waa inuuna waligaa wax shalaay ah hayn. Waa inaan garwaaqsanno barakeysan intii suuragal ah. Anaga…